Ukudibana okuncinci kukufundisa ukugcina iibhegi zokonga indawo-Iindaba-kwi-Dongguan Yihua Handbag Co, Ltd.
Ikhaya > Iindaba > Iindaba Zoshishino > Ukudibana okuncinci kukufundisa ukugcina iingxowa ukugcina indawo
Uzigcina kanjani iibhegi zihlala ziyintloko kubafazi, kuba iingxowa zahlukile kwimpahla kwaye azinakusongwa, ngenxa yoko kufuneka indawo eyaneleyo yokugcina iingxowa. Kodwa ayinguye wonke umfazi onokuba nayo ikhabethe enkulu yokugcina iibhegi. Namhlanje ndiza kwazisa ngeengcebiso ezimbalwa zokugcina iibhegi.
Icebo lokuqala, iintlanzi ezinkulu zitya iintlanzi ezincinci. Njengoko igama libonisa, indlela iintlanzi ezinkulu ezitya ngayo iintlanzi ezincinci kukusebenzisa iipakeji ezinkulu kunye neebhegi ezincinci ukugcina iingxowa nganye nganye. Le ndlela ifaneleke ngakumbi kwiingxowa ezinezikhumba ezinzima. Ngokubanzi, xa ugcina iibhegi, eyona nto inengxaki lolu hlobo lweebhegi, ezingenakusongwa okanye ukucudiswa. Kwangelo xesha, ezinye iifilili mazifakwe engxoweni ukunqanda ukufinywa nokukhubazeka. Ukubeka ibhegi encinci kwingxowa enkulu akugcini nje ngokugcina indawo efunekayo yokugcina, kodwa kukwasebenza njengesixhobo sokugcwalisa ingxowa, enokuthi ichazwe njengokubulala iintaka ezimbini ngelitye elinye.
Icebo lesibini: qengqa iphakheji kuluhlu olunye. Le ndlela ifaneleke ngakumbi kwiingxowa ze-canvas. Ngenxa yento, olu hlobo lwebhegi lunokusongwa ngokukhululekileyo kwaye akukho lula ukuyilungisa, ukuze sikwazi ukuyiqengqa ngokukhuselekileyo ingxowa kwisangqa, emva koko siyibeke ngokobunzulu bombala. Xa uhlala uyifuna, jonga ukuba yeyiphi na inkqubo oyifunayo. Iphakheji ikulungele kakhulu ukuyifumana.
Icebo lesithathu kukwenza eyakho ibhegi yokugcina ibhegi. Iikhabhathi kunye neekhabhathi zigcwele, kodwa kusekho iibhegi ezininzi kakhulu. Ndingenza ntoni? Ngapha koko, sinokuzama eyethu i-DIY kwaye senze ibhegi yokugcina ibhegi elula, enokuthi isombulule ngokulula le ngxaki. Kuya kufuneka ulungiselele ilaphu ngokwaneleyo kwaye usike kubungakanani bengxowa kabini. Emva kokusika, songa ilaphu kwisiqingatha ukusuka embindini kwaye uthunge ezi ziphelo zibini kunye, ukuze ibhegi yokugcina ilungile. Ewe kunjalo, eli linyathelo nje lokwenza ibhegi yokugcina ibhegi. Unokwenza iibhegi zokugcina ezininzi ngokwenani leebhegi zakho. Emva kokwenza iingxowa ezininzi zokugcina, lungisa ezi ngxowa zigcinwe kwintambo kwaye uzixhome emva kocango. Okanye eludongeni. Xa ungayisebenzisi, kufuneka uyixhome eludongeni okanye ngasemva komnyango, kwaye ayizukuthatha ndawo ininzi. Ukuba ufuna ukuyisebenzisa, vele ukhuphe ibhegi ecaleni.
Edlulileyo:Iingcebiso zokulondolozwa kwengxowa ongazaziyo
Okulandelayo:Iimfihlo zeengxowa zokuthambisa zamantombazana